China Abavelisi bezixhobo zokuNxibelelana nabaThengi - i-Chaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > Izixhobo zonxibelelwano
Izixhobo zonxibelelwano ezenziwe e-China zingathengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
I-RJ-45 kunye ne-RJ-12 yokuSebenzisa isiXhobo seCrimping
Le yi-RJ-45 kunye ne-RJ-12 yokuSebenzisa isiXhobo sokuSebenza ngokuBini. Sinikezela ngesixhobo, ibhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye lesitshixo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-RJ-45 kunye ne-RJ-11 yokuSebenzisa isiXhobo seCrimping
Le yi-RJ-45 kunye ne-RJ-11 yokuSebenzisa isiXhobo sokuSebenza ngokuBini. Sinikezela ngesixhobo, ibhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye lesitshixo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Le yi-LCD intambo tester RJ45-RJ45. Sinikezela ngesixhobo, ibhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye lesitshixo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Isixhobo se-501 Stripper
Esi sisixhobo se-501 Stripper. Sinikezela ngesixhobo, ibhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye lesitshixo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Isixhobo seNethiwekhi (sikhona kwiintlobo ezahlukeneyo zezixhobo)
Isixhobo seKhithi yeNethiwekhi (efumanekayo kwizixhobo ezahlukeneyo): Le nto ibandakanya i-RJ-45 kunye ne-RJ-12 yokuSebenzisa isiXhobo sokuSebenza esiBini, isiXhobo sohlobo lweMpembelelo yesiXhobo, isixhobo sovavanyo lweCable kunye nesiXhobo sokuhlutha. Sinikezela ngesixhobo, ibhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye lesitshixo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Uhlobo lwe-110 Isixhobo seMpembelelo
Uhlobo lwe-110 Isixhobo seMpembelelo: Izixhobo zonxibelelwano esinokubonelela ngazo kubandakanya uhlobo lwezixhobo zokufaka, ifuthe kunye nesixhobo sokubhoboza izixhobo zangaphantsi, izixhobo zokuncwina, isixhobo sokuqhawula intambo kunye nokusika, isixhobo sokuvavanya intambo kunye nesixhobo sokususa isixhobo sokudibanisa, njalo njalo. Isixhobo sokucinezelwa kobuchwephesha kwezinxibelelanisi ezahlukeneyo, izixhobo zokufaka kwiimodyuli ezahlukeneyo. Ukugcina iindleko kubathengi, sinqwenela ezinye izixhobo ezinemisebenzi emininzi. Yiyo loo nto unokugcina isixhobo esinye endaweni yezixhobo ezahlukeneyo. Kwisixhobo esithile se-coaxial crimping isixhobo, unokutshintsha intloko ukuze ilingane nenkcazo yekhebula, eya kuthi ikwenze unciphise umzimba kuseto lwezixhobo kwaye ugqibe umsebenzi wakho ngokukuko.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Izixhobo zonxibelelwano abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Izixhobo zonxibelelwano eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.